Asidra Amino, Dipeptide, Tambajotra heterocyclic - Baishixing
Niorina tamin'ny Jan.29, 2003, Any amin'ny faritra indostrialy, manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana asidra amino sy ny derivatives izahay.Tamin'ny taona 2011, ny tetikasa fanovana ara-teknika AA dia notanterahina, miaraka amin'ny tsipika famokarana asidra amine roa sy tsipika famokarana mpanelanelana fanafody iray, ary atrikasa famokarana maherin'ny 5000 metatra toradroa no naorina araka ny fenitra GMP nasionaly.
Fikarohana ny kalitao avo indrindra
Chengdu Baishixing dia manolotra grama ho an'ny orinasa mpamokatra asidra amino kilao ao Shina.
Taratasy angon-drakitra azo antoka
Chengdu Baishixing dia tapa-kevitra ny handray anjara amin'ny fampandrosoana ny fitsaboana ny olombelona sy ny indostrian'ny sakafo.
Raha misy alanyl-l-tyrosine mitete tsy nahy rehefa mampiasa azy, ahoana no fomba hiatrehana azy io araka ny tokony ho izy?Chengdu Baishixing dia milaza aminao ireto dingana ireto: 1. Raha voafoka, dia afindrao amin'ny rivotra madio ny olona.Raha tsy miaina dia omeo rivotra artifisialy.
L-Leucine, 537-55-3, Pharmaceutical Chemical, Acetyl-L-Leucine, L-Glutamine vovoka, Dl-Pyroglutamic asidra,